Religious Archives - VPS - Shweman Online Media
ဖုန်းကိုင်ခွင့်မရှိ အပြင်ထွက်ခွင့် မရှိသော မြန်မာနိုငံရဲ့ အကြီးမားဆုံး သီလရှင်စာသင်တိုကဖုန်းကိုင်ခွင့်မရှိ အပြင်ထွက်ခွင့် မရှိတဲ့ မြန်မာနိုငံရဲ့ အကြီးမားဆုံး သီလရှင် စာသင်တိုက် စစ်ကိုင်း သကျ ဓီတာ (ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ) စာသင်တိုက် ဖြစ်ပါတယ်။ စည်းကမ်းအရမ်းကြီးတယ်လို့ နာမည်ကြီးပါတယ်။ စာသင်သူ သီလရှင် သိက္ခာရှင်) ပေါင်း အပါး ( ၂၅၀) ကျော်ရှိတယ်။
တဈသကျမှာတဈခါ ဖူးမွှျောဖို့ ခဲယဉျးလှတဲ့ ဗုဒ်ဓမွတျစှာဘုရားရဲ့ အံတျောကို ဖူးလိုကျပါ ကံထူးလို့ ဖြာပုံသူဖြာပုံသားမြားနှငျ့ မွနျမာ တဈပွညျလုံးမှာရှိတဲ့ ဖူးခြိနျတနျ ဖူးထိုကျလို့.ဖူးမြှျောခှငျ့ရလို့ ထငျပါပွီ။ ကြှနျတျော ကလေးဘဝတညျးက ဘိုးဘိုး ၊ဘှားဘှား၊ဘိုဘေး အစဉျအဆကျကတညျးက ဖြာပုံမှာ ဗုဒ်ဓမွတျစှာဘုရား အံတျောနှငျ့ ဆံတျောတဈဆူ ကိမျးဝပျနတေယျလို့ သိခဲ့ရပါတယျ ရှေးဟောငျး သမိုငျးအစဉျအလာအရ ရှေးကတြဲ့ မွို့တှကေ
သီတဂူဆရာတျောကွီးသညျ COVID-19 ကပျရောဂါ Stay Home ကာလ ဆှမျးဆနျခံ မထှကျနိုငျကွကုနျသော ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးအတှငျး သီတငျးသုံးနထေိုငျကွသညျ့ သာသနာ့အနှယျဝငျ သီလရှငျမြားကို တဈပါးအတှကျ ဆနျ-၁တငျး၊ ဆီ-၁ပိသာနှုနျးဖွငျ့ ထောကျပံ့လှူဒါနျးပေးပါသညျ။ ပဉ်စမနရေ့ကျအဖွဈ ၁၆-၆-၂၀၂၀ ရကျ၊ နခေ့ငျး ၁:၀၀ နာရီအခြိနျမှစတငျ၍ ရနျကုနျတိုငျး၊ သံလြှငျမွို့နယျ၊ မဟာအတုလ သဒ်ဓမ်မရံသီ သာသနာ့ဗိမာနျတျောကွီးတှငျ သံလြှငျ၊
လာဘ်ပိတ်၍ စိတ်ညစ်နေသူများအတွက် သစ်တံခါးဆရာတော်၏လ်ာဘ်ပွင့်၍ ငွေရွှင်စေမည့်နည်းလမ်း
မိမိ မွေးနေ့ ၏ နံနက်ပိုင်း ၉:၄၅ မိနစ် (သို့ ) ၁၀:၁၀ မိနစ် တွင် ဆောင်ရွက်ရပါမည် ။ ထူးခြားစွာ လ်ာဘ်ပွင့်၍ ငွေရွှင်စေနိုင်ပါသည်။ ပြုလုပ်ရန် ကြေးအိုး (သို့) အောင်အိုး(သို့) မြေအိုးပတ်လည်တွင် ” စ,ဓ,ဗ,ဝ.. အောင် လာဘ် ရွှင်စေ ငွေဝင်စေရန် ကင်းစေ
သေချင်​​လောက်​​အောင်​ ကံဆိုး​နေပါ​စေ ဘယ်​​ဗေဒင်​ ယတြာမှမလို ဒီဂါထာထုံ​အောင်​သာ ရွတ်​​နေပါ
သေချင်​​လောက်​​အောင်​ ကံဆိုး​နေပါ​စေဘဝ​မျော်​လင့်​ချက်​ ​ပျောက်​​နေပါ​စေ အ​ကြွေး​တွေပိ စိတ်​​မျော်​ဝင်​​ငွေမရှိမိသားစု​ရေး အိမ်​တွင်း​ရေး အလုံးစုံညံ​နေပါ​စေစိတ်​ဓာတ်​ကျပြီး အထီးကျန်​ စိတ်​အရူးတပိုင်းဖြစ်​​နေအုန်းဒီ​တောင်​ကို ​ကျော်​နိင်​ပါ့မလား​တွေးပူ​နေသူများဘယ်​​ဗေဒင်​ ယတြာ မှ မလိုအပ်​ပါ ထုံ​အောင်​သာ ရွတ်​​နေပါ ဇလွန်​ပြည်​​တော်​ပြန်​ဂါ​ထာ ​တော်​ကြီးထူးကို ထူး​စေပါသည်​ တကယ်​လုပ်​ရင်​ တကယ်​ဖြစ် Credit – YomaLan unicode version သခေငျြ​​လောကျ​​အောငျ​ ကံဆိုး​နပေါ​စေ ဘယျ​​ဗဒေငျ​ယတွာမှမလို
မြတ်စွာဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး မြန်မာနိုင်ငံကို ဘယ်နှစ်ကြိမ်ကြွခဲ့ပါသလဲ?
မြတ်စွာဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး မြန်မာနိုင်ငံကို ဘယ်နှစ်ကြိမ်ကြွခဲ့ပါသလဲ? ၁။ ပထမအကြိမ် မဟာသက္ကရာဇ် (၁၀၄) ခုနှစ် ဒုတိယဝါ သက်တော် ၃၆ နှစ်တွင် ဖိုးဦးတောင် ( ပြည်မြို့အနီး ) သို့ကြွချီတော်မူသည်။ ပြည်ရွှေဆံတော် စေတီပေါ်ထွန်းခဲ့သည်။ ၂။ ဒုတိယအကြိမ် မဟာသက္ကရာဇ် ( ၁၁၁ )ခုနှစ် ဝါတော်( ၈
၇ရက်သားမီး လိုအင်ပြေစေဖို့ နေ့နံအလိုက် အလင်းတိုင်ပူဇော်နည်း
မည်သည့်နေ့နံသားသမီးမဆို ကျက်သရေ မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့်ပြည့်ဝစေရန် နှင့် ဖြစ်ပျက်တွေ့ကြုံခံစားနေရသည့် သောက ဒုက္ခများ ခပ်သိမ်း ကင်းလွှတ်စေရန် အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ နေ့နံတစ်ခုချင်းစီအလိုက် အလင်းတိုင်ထွန်း ရမည့်”အရပ်မျက်နှာ” နှင့် “ဖယောင်းတိုင်” အရေအတွက်နှင့်နေ့ရက်များကိုအောက်တွင် အတိအကျဖော်ပြရေးပြထားပါတယ်။ တနင်္ဂနွေသားသမီးများ မိမိနေအိမ်အတွင်းရှိ “အနောက်အရပ်”တွင် ဖယောင်းတိုင်အသေး(၅)တိုင်ကို ခုံအမြှင့်ပေါ် စတီးပန်းကန်ပြားတစ်ချပ်တွင်စိုက်စေ၍ (၁၉)ရက်တိတိ ထွန်းညှိပူဇော်ရမည်။မိမိလိုရာကိုရိုသေစွာပြောဆို၍ ဆုတောင်းလိုက်ပါ။ တနင်္လာသားသမီးများ မိမိနေအိမ်အတွင်းရှိ
ကျေးဇူးတော်ရှင် စွန်းလွန်း ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ “ငါးပေါက် မှားတော့ ငါးပါးမှောက်” ဆိုတဲ့ ဆုံးမစာ
ဒါယိကာမလေးတွေ နင်တို့မကြိုက်တာ ပြောရဦးမယ်။ မချောချင်နဲ့၊ ပစ္စည်းမပေါချင်နဲ့၊ ဂုဏ်မကြီးချင်နဲ့၊ ကြပ်ကြပ်လှ -ကြပ်ကြပ်ချော-ကြပ်ကြပ်ပစ္စည်းပေါပြီး ကြပ်ကြပ်ဂုဏ်ကြီးလျှင် ကြပ်ကြပ်ဒုက္ခရောက်တတ် တယ်။ မျက်စိအလိုလဲ မလိုက်နဲ့၊ နားအလိုလဲ မလိုက်နဲ့၊ လျှာအလိုလည်း မလိုက်နဲ့၊ ခန္တာကိုယ်အလိုလဲ မလိုက်ကြနဲ့၊ အလိုလိုက်မှဖြင့် အမိုက်စော်ကားတတ်ကြတယ်။ ဘယ်လို အမိုက်စော်ကားပါသလဲဆိုရင် အဲဒီ နား၊ မျက်စေ့-နှာခေါင်း၊ လျှာ၊ ခန္တာကိုယ်
ယနေ့ စစ်ကိုင်းမှာ ဆင်ချည်တိုင်တော်ဘုရား စေတီတော်မြတ်အား ထိန်းသိမ်းပြုပြင်တည်နေစဉ် ဘုရား ဆင်းတုတော်တစ်ဆူပေါ်လာ (ရုပ်သံ)
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၊ အုန္နဲပင်ရွာနှင့် စာလဲတောရွာကြားရှိ ဆင်ချည်တိုင်တော်ဘုရား စေတီတော်မြတ်အား ထိန်းသိမ်းပြုပြင်တည်နေစဉ် ယနေ့ မှာ ရှေ့ဘုရား ဆင်းတုတော်တစ်ဆူ ပေါ်လာမှုအား ကုသိုလ်ပွားစေရန် မျှဝေလိုက်ပါတယ်… Unicode စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီး၊ စဈကိုငျးမွို့နယျ၊ အုန်နဲပငျရှာနှငျ့ စာလဲတောရှာကွားရှိ ဆငျခညျြတိုငျတျောဘုရား စတေီတျောမွတျအား ထိနျးသိမျးပွုပွငျတညျနစေဉျ ယနေ့ မှာ ရှဘေု့ရား ဆငျးတုတျောတဈဆူ ပျေါလာမှုအား ကုသိုလျပှားစရေနျ